Ndụmọdụ gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị maka naanị ụbọchị ị ga - ezute! »Sugarlove®
Ndụmọdụ gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị maka naanị ụbọchị ị ga - ezute!
Ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-alụbeghị di na-enwe oge siri ike izute onye ziri ezi. Nke a bụ n’ihi na n’oge mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ha na-ezutekarị ndị na-enweghị otu ebumnuche na ebumnuche ha. Dịka ọmụmaatụ, ka ị na-achọ onye gị na ya dị ogologo oge ị ga --ebi ndụ, ị nwere ike izute ọtụtụ ndị nọ na ebe a na - akpa nwa na - achọ ihe ngwa ngwa.
Usoro mkpakọrịta nwoke na nwanyị na isoro onye ahụ na-ezighi ezi mgbe niile nwere ike ịkụda gị mmụọ ma nke a apụtaghị na ị kwesịrị ịhapụ ya. Izute onye kwesiri ya na-ewe oge dị ukwuu ma nwee ezigbo ntụzịaka, usoro a ga-adịkwu mfe ma na-atọkwa ụtọ karịa. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji nyere gị aka izute onye kwesịrị ekwesị ma wuo mmekọrịta bara uru, nke na-adịgide adịgide.
Chọpụta Ihe Na-egbochi Gị Lovechọta Lovehụnanya
Ihe ndị na-egbochi ịchọta ịhụnanya nwere ike ịnwe onwe gị ma ọ bụ kpatara gburugburu ebe obibi gị. Offọdụ ihe gbochiri onwe gị ịbanye n’ịhụnanya gụnyere ime ka onwe gị kwenye na ọdịghị ndị ezi mmadụ ọzọ, ndụ ọrụ na-adịghị mma na atụmanya dị elu. Ihe ndị dị na mpụga gụnyere akpa obi mmetụta nke mmekọrịta ndị gara aga na etolite na gburugburu mkparị.
Mgbe ịchọpụtachara ihe mgbochi gị, mee ha. Ghọta na ihe ọ bụla merela na gburugburu ebe obibi gị abụghị ihe gị mere ya na ọ bụ ịpụpụ onwe gị iche na-enwe ike ịchọta onye ị hụrụ n'anya. Ihe mgbochi onwe ya chọrọ ọrụ ka ukwuu. Ọ gụnyere ịmepụta oge iji dozie ndụ gị, ịghọta ihe niile dị njọ n'echiche gị yana ebumnuche banyere ịchọta ịhụnanya.
Nyochaa echiche na-abụghị eziokwu banyere Lovehụnanya na Mkpakọrịta
E nwere ọtụtụ ihe ndị a na-aghọtahie banyere ịchọta ịhụnanya na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Offọdụ n’ime ha gụnyere; Enwere ike inweta obi ụtọ naanị mgbe gị na onye gị na ya na-akpakọrịta, ịdọrọ mmasị ozugbo pụtara na ị ga-agbaso mmekọrịta ahụ, ụmụ nwanyị nwere mmetụta karịa nwoke, ezi ịhụnanya na-adịgide ma ị nwere ike ịgbanwe onye ị hụrụ n'anya.
Okwu ndị a nile na-eduhie eduhie. Dispchụpụ ụfọdụ n’ime ha, ịdọrọ obi ọsọ apụtaghị ịhụnanya na-adịgide adịgide. Mmetụta uche na-agbanwe ka oge na-aga ma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-anaghị enwe mmekọrịta ozugbo na-abụ ndị hụrụ onwe ha n'anya ka ha na-anọkọ. Eziokwu ọzọ bụ na ịhụnanya abụghị ihe gbara ọtọ. Ọnọdụ Hormones na ndụ ndụ nwere ike ịgbanwe mmetụta anyị site n'oge ruo n'oge mana nke a apụtaghị na mmekọrịta ahụ ga-aga n'ihu.
Mara Ihe your Na-atụ Anya Ya n’inweta Lovehụnanya
Mgbe anyị na-achọ ịhụnanya, mgbe ụfọdụ anyị na-enwe atụmanya na-ezighi ezi banyere ụdị mmadụ anyị ga-achọ ka anyị na ya nwee mmekọrịta. Ihe ndi a n’eme bu mgbe anyi n’egosi anyi ihe ndi enyi anyi, ezinulo anyi na telivishọn anyi gosipụtara. Nke a nwere ike ime ka ị mata onye gị na ya nwere ike ịbụ adịghị ike. Ifyingmata ihe ndị na-agụ gị maka ihe adịghị mma ga-abụ ụzọ dị mma ịmalite.
Nwee Obi Ike ma malite Mkpakọrịta
Mgbe enwere ọtụtụ ihe mgbochi ụbụrụ na-egbochi gị ịchọta ịhụnanya, mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịwụli elu ma bido ịkpa. Ozugbo ị wepụsịrị ụfọdụ n’ime ihe mgbochi, chọpụta ụzọ dị iche iche ị ga-esi achọ izute mmadụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị ebe ndị ọzọ na-ahọrọ ịme ka ndị enyi na ndị ikwu ha nwee ike ịmekọrịta ha. Choo ihe obula diri gi aru ma bido njem.
Mee ndu n’ile anya
Otu n'ime oge kacha sie ike n’oge mkpakọrịta nwoke na nwanyị bụ ichetara onwe gị na e nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụ karịa dị mkpa karịa ịchụso mmekọrịta ịhụnanya. Na-ebikwa ndụ ma na-achụso nrọ gị ka ị na-achọ ịhụnanya. Chetakwa ka ị ghara ịhapụ ka ị nweta gị ka ị jiri ụzọ nweta gị nweta ihe ị gwara gị mee, nakwa na mmadụ niile nwere ntụpọ, tinyere gị onwe gị.
Ezigbo njikọ dị mkpa na mmekọrịta ịhụnanya. Listge ntị, ị attentiona ntị na igosi ezi mmasị ga-enyere gị aka ijikọ njikọ na-adịgide adịgide. Otu ụzọ ị ga - esi gee ntị nke ọma bụ ịghara ilekwasị anya n'echiche gị na ịnọ ya oge ọ bụla ị ga - ezute onye gị na ya nwere ike ịbụ enyi.
Na-ebute Funtọ Priorzọ
N’oge mkpakọrịta nwoke na nwanyị, enwere oge nwere ike ịweta ọtụtụ nrụgide. Nke a na - apụtakarị ma ị bịakwute mkpakọrịta nwoke na nwaanyị dịka ọrụ ma ọ bụ ihe mgbakwunye gụnyere ịhazi onwe gị ka ndị ọzọ wee nabata gị. Naanị nọrọ gị nso ma tinye onwe gị n'ihe omume ndị na-amasị gị mgbe ahụ ị ga-ezute ndị nwere ụdị obi ahụ na gburugburu ndị ahụ.
Nwee amara n’ịgọnarị ajụjụ
Ọpụpụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. N'oge ụfọdụ na ndụ, ị ga-ahụ ya. Mee ohere maka ịbụ onye ajụrụ ma were ya dị ka ihe nkịtị na ndụ. Ka ọ ghara mkpali ụdị iwe ọ bụla n’ebe ndị mmadụ nọ ma ọ bụ gbochie gị ịchọ ịhụnanya. Ghọta mmetụta gị ma gaa n'ihu.
Lezienụ anya maka ọkọlọtọ Red
Red flags na-eme dị ka ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị iji gosi na mmekọrịta ahụ nwere ike ọ gaghị adịgide. Ọ dị mkpa ịtụkwasị obi gị mgbe ị hụrụ na ihe adịghị mma gbasara onye ị na-achọ ịlụ. Offọdụ n’ime ọkọlọtọ acha ọbara ọbara gụnyere ịdabere mmanya, iro iro, enweghị mkparịta ụka, omume na-achịkwa ya na enweghị obi gị.
Mụta ịtụkwasị obi
Ahụmahụ mmekọrịta gara aga nwere ike ịmepụta nsogbu ntụkwasị obi na ọtụtụ mmadụ. Nwere ike na-atụ ụjọ ịbụ onye e mere ka ike gwụ gị, onye aghụghọ ma ọ bụ ọbụna bụrụ onye dị mfe n'akụkụ onye ọzọ. Tụkwasị ndị mmadụ obi ga-achọ nnukwu mgbali ma oge ụfọdụ, ịnwere ike ịchọ enyemaka nke onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ otu nkwado. Knowingmara na mmadụ niile na ahụmịhe dị iche bụ nzọụkwụ mbụ na ịtụkwasị obi ọzọ.
Zụlite Mmekọrịta ahụ
Hụ onye ziri ezi anaghị ekwe gị nkwa na mmekọrịta ahụ ga-adịru mgbe ebighi ebi. Ikwesiri igbali isi na nmekorita gaa na nmekorita bara uru nke ga adi ogologo. Nke a na-achọ ọtụtụ ọzụzụ ma na-agụnye nkwurịta okwu ghere oghe, mkpebi esemokwu ziri ezi, itinye ego na ibe ya na ịbụ onye nwere obi eziokwu, ọkachasị na mgbanwe.
Lovechọta ịhụnanya nwere ike ịbụ ụdị ahụmịhe dị ebube mana onweghị mmekọrịta ọ bụla maka egwu nke owu ọmụma. Ọtụtụ ndị na-eme nke a na-ezute ụdị ndị mmadụ na-ezighi ezi na-ejedebe na ahụmahụ ndụ dị egwu. Ọ dị mma inwe ndidi na njem a karịa ịgbanye ọsọ na ihe ọ bụla. Zụlite ndụ gị, kporie ndụ ma lekọta nrọ gị mgbe ị nọ.